မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်အနှစ်သက်ဆုံးအသင်းက အင်္ဂလန်အခြေစိုက် မန်ချက်စတာယူနိုင်တက် အသင်းဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ အလားတူထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေအမြောက်အမြားရှိတဲ့အနက်ဘယ်သူတွေကရောဘယ်အသင်းကိုအားပေးကြလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်….
လီဗာပူးအသင်းပရိသတ်ဖြစ်ပြီး ဘောလုံးလောက အမှတ်တရတစ်ခုကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက မန်ချက်စတာယူနိုင်တက်အသင်းနည်းပြဟောင်းကြီး ဖာဂူဆန်တစ်ယောက် Daniel Craig မိခင်နဲ့တွေ့ဆုံးချိန်တုန်းကတော့ မန်ယူအသင်း အိမ်ကွင်းကို လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါ မိခင်ဖြစ်သူက "ကျွန်မသားက ဘယ်တော့မှ မန်ယူအိမ်ကွင်းကိုလာမှာမဟုတ်နိုင်ပါဘူး"လို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
Tom Hanks (Aston Villa F.C.)
အန်စတွန်ဗီလာအသင်းပရိသတ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး Tom Hanks က မကြာခဏဆို အသင်းထံလာရောက်အားပေးလေ့ရှိပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေ ဗီလာအသင်းရုပ်သံအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။
James McAvoy (Celtic F.C.)
၂၁ရာစုရဲ့ အလင်းလက်ဆုံး သရုပ်ဆောင် James McAvoy ကတော့ စကော့တလန် ကလပ် ဆဲတစ်အသင်းပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ။တစ်ခါတစ်လေ ဆဲတစ်အသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ စကားနိုင်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
Samuel L. Jackson (Liverpool F.C.)
Samuel L. Jackson နဲ့ အိုဇေးလ်တို့တွဲနေပုံက အာဆင်နယ်အသင်းပရိသတ်အဖြစ်ပေါ်လွင်စေခဲ့ပေမယ့် အဲ့ပုံက ချက်ချင်းပဲ Twitter ပေါ်ကနေ အဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ Samuel L. Jackson ကလီဗာပူးအသင်းပရိသတ်ပါ။
Sylvester Stallone (Everton F.C.)
ရမ်ဘိုမင်းသားကြီးက အဲဗာတန်အသင်း ပရိသတ်စစ်စစ်ပါ။မကြာခဏဆို အဲဗာတန်အသင်း အိမ်ကွင်းထံ မကြာခဏလာရောက် အားပေးလေ့ ရှိပါတယ်။